I-Autodesk Construction Solutions isandula ukubhengeza ukuqaliswa kweGumbi elikhulu, uluntu lwe-intanethi oluvumela iingcali zokwakha ukuba zinxibelelane nabanye kwishishini kwaye zidibanise ngqo neqela le-Autodesk Construction ...
I-Leica BLK360 iskena I-bundle entsha iqulathe i-Leica BLK360 i-laser imaging scanner, i-Leica Cyclone REGISTER 360 desktop software (BLK Edition) kunye ne-Leica Cyclone FIELD 360 yeetafile kunye neefowuni. Abathengi banokuqalisa kwangoko...
I-AUTODESK YAZISA I-REVIT, INFRAWORKS, KUNYE NE-CIVIL 3D 2020 Autodesk ibhengeze ukukhululwa kwe-Revit, InfraWorks, kunye ne-Civil 3D 2020. I-Revit 2020 Nge-Revit ka-2020, abasebenzisi baya kuba nakho ukwenza amaxwebhu achanekileyo kunye neenkcukacha ezicacileyo ezibonisa injongo engcono ...
Dweba amaphulo, imigca kunye neetekisi ze-polygonal ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD
Ndinolu luhlu lolungelelwaniso kwi-Excel. Kwezi kukho u-X ulungelelanisa, u-Y ulungelelanisa, kunye negama le-vertex. Into endiyifunayo kukuzoba kwi-AutoCAD. Kule meko siya kusebenzisa ukuphunyezwa kwemibhalo evela...
Ndibe nethuba lokunxulumana noGabriela ubuncinane izihlandlo ezithathu. Okokuqala, kwezo klasi zaseyunivesithi apho saphantse sadibana kwiFaculty of Civil Engineering; emva koko kwiklasi ebonakalayo yeTekhnoloji yoLwakhiwo emva koko…
Eyona nto ibalaseleyo ngeSoftware yoKwakha-Amabhaso oKwakha eComputer ka-2018
Olu lukhuphiswano oluvuza ezona nzame zesoftware zijolise kuZakhiwo, ubuNjineli kunye noKwakha. Olu luhlu lwabagqwesileyo bokugqibela lusixelela ukuba lunjani ukhuphiswano phakathi kwababoneleli abaphambili bezisombululo zokubala kwi-geo-engineering kwi…
I-Wms2Cad-iinkonzo zonxibelelwano ze-wms kunye neenkqubo ze-CAD
I-Wms2Cad sisixhobo esisodwa sokuzisa iinkonzo ze-WMS NE-TMS kumzobo we-CAD ukuze zisetyenziswe. Oku kuquka uGoogle Earth kunye ne-OpenStreet imaphu yeemephu kunye neenkonzo zemifanekiso. Ilula, iyakhawuleza kwaye iyasebenza. Kuphela luhlobo lwemephu olukhethiweyo...
Dweba izilungiso kwi-AutoCAD kwifayile ye-Excel CSV
Ndiye entsimini, ndaza ndanyusa amanqaku ali-11 ewonke, njengoko kubonisiwe kumzobo. Isi-7 saloo manqaku yimida yendawo engenanto, kwaye ezine ziikona zendlu ephakanyisiweyo.…
Uyikhuphela njani i-AutoCAD 2018-inguqulelo yemfundo
Iinguqulelo zezemfundo ze-AutoCAD zisebenza ngokupheleleyo, zombini kubafundi kunye nootitshala. Ukukhuphela inguqulo yomfundi we-AutoCAD, landela la manyathelo: 1. Fikelela kwiphepha le-AutoDesk. Ngena kwiakhawunti yakho okanye wenze entsha.…
I-BIM-Ihlabathi endandingaliphupha kwiminyaka engama-20 eyadlulayo
Kwiminyaka engama-20 kamva, ndiyakwazi ukudibanisa i-BIM kuphela njengendaleko emele elo xesha ishiya ibhodi yomzobo kunye nephepha lokulandelela iifayile zeCAD. Yayiyindaleko echukumisayo leyo, xa ucinga ukuba wayevela ekubeni ngumzobi...
I-BIM-imeko engenakuphikwa yeCAD
Kumxholo wethu weGeo-Engineering, igama elithi BIM (iModeli yoLwazi loKwakha) ayisekho ntsha, evumela izinto ezahlukeneyo zobomi bokwenyani ukuba zenziwe imodeli, kungekuphela nje kwimizobo yazo kodwa nakwizigaba zazo ezahlukeneyo…
Namhlanje, njengoko i-Intanethi ikufuphi, ukufunda akusesosizathu. Ukusuka ekwazini ezo algorithms ongazange wazi ukuba zikhona zokuhlanganisa iRubik's cube kwisikolo samabanga aphakamileyo ukuthatha izifundo zasimahla ze-AutoCAD kwi-Intanethi. Ukubaluleka komzekelo...
Jonga kwaye ukuguqula iifayile dwg ukusuka iinguqulelo ezahlukeneyo AutoCAD
Ngokubanzi, xa besithumela ifayile yedwg, kuhlala kukho ingxaki ngoguqulelo abagcinwe ngalo. Nazi ezinye iindlela zokusombulula ingxaki: Loluphi uguqulelo lwe-dwg Oku akunakwenzeka ukuchongwa, kuba ifayile...
Ukuqonda ingqiqo BIM, kwimeko Bentley Systems
Ngamagama alula, i-BIM (i-Building Information Modeling) kukuvela kwengcamango yendabuko ebizwa ngokuba yi-CAD (i-Computer Aided Design) kwaye nangona kukho iincwadi ezipheleleyo ezibhaliweyo malunga nayo emva kokuba uJerry Laiserin evakalise igama, ngeenjongo zemfundo siya kufuna ukuba ...
Sele sibonile ezinye iinkqubo ezikhuphela imifanekiso kwiGoogle Earth. I-Georeferenced okanye hayi, ezinye azisekho njenge-StitchMaps kunye ne-GoogleMaps Downloader. Ngenye imini umhlobo wandibuza ukuba yintoni eyenziwa yiPlex.Earth esuka kwi-AutoCAD yaphula...
Ezinye zeendaba esizibonileyo kwinguqulo ye-beta ye-AutoCAD 2013 ebizwa ngokuba le nguqulo Imihlathi isixelela ukuba yeyiphi imikhwa esiya kuyibona ngo-Aprili 2012, xa iya kukhutshwa ngokusemthethweni; Nangona singayithembi into entsha ...